Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka cusbooneysiiyay » Mideynta geesiyaasha DC iyo Villians -ka Ciyaarta Mobile -ka
Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! • Wararka cusbooneysiiyay
Ciyaarta moobilka RPG ee abid ugu horeysay ee ay ka muuqdaan jilayaasha DC-ga ayaa imanaya 2022 oo hadda u furan bandhigyo horudhac ah.
Hormuudka horumarinta madadaalada mobaylada Ludia, istuudiyaha Jam City, ayaa maanta daaha ka qaaday DC Heroes & Villains, ciyaartii ugu horreysay abid-3 ciyaar ciyaar halxiraale ah (RPG) oo lagu dejiyay DC Universe, oo shati u siisay Warner Bros. Interactive Entertainment isagoo matalaya DC. Ciyaartu waxay ka farxin doontaa taageerayaasha majaajilada DC oo leh sheeko asal ah oo ay ku jiraan xiddigo dhan oo Super Heroes la jecel yahay iyo Super-Villains oo ay ku jiraan Batman, Superman, Wonder Woman, Joker iyo Harley Quinn. Heroes DC & Villains ayaa laga heli doonaa adduunka oo dhan horaanta 2022 ee App Store iyo Google Play. Laga bilaabo maanta, geesiyaasha iyo shar-wadayaasha si isku mid ah ayaa isu diiwaan gelin kara gelitaanka ciyaarta oo waxay heli karaan waxyaabo gunno gaar ah marka la bilaabo, www.dcheroesandvillains.com.
Muujinaya sheeko hodan ah, sheeko asal ah, DC Heroes & Villains waxay keenaysaa goobo sumcad leh sida jidadka Gotham City iyo moolka Atlantis ee nolosha. Wadnaha dahsoon ayaa meesha ka saaray dhammaan quwadaha waaweyn waxayna ku xirnaan doontaa ciyaartoyda inay qortaan kooxda awoodda ugu dambeysa, labada dhinac ee caddaaladda, si ay uga hortagaan dabar goynta guud.
Ciyaartoyda waxay u baahan doonaan inay noqdaan kuwo istaraatiiji ah markay dhex maraan ciyaarta adag ee DC Heroes & Villains, oo ay ka buuxaan hal ciyaartoy oo adag ciyaarta-3 dagaal iyo dhacdooyin kooxeed halkaas oo ay u baahan doonaan inay ku ururiyaan saaxiibadooda si ay uga adkaadaan madaxda abaal-marinno qaali ah. Dhacdooyinka tooska ah ee la qorsheeyay oo ay ku jiraan ciyaaraha PVP iyo Guild Raids waxay isu keeni doonaan taageerayaasha DC ee adduunka oo dhan si ay uga qayb qaataan la dagaallanka abaalmarinnada gaarka ah ee ciyaarta dhexdeeda.
"Waxaan si gaar ah ugu hanweynahay inaan ku dhawaaqno magacayada cusub, DC Heroes & Villains," ayuu yiri Alex Thabet, maamulaha Ludia. "Ciyaartani waxay soo bandhigaysaa sida ugu fiican ee Ludia, oo leh ciyaar-jilicsan iyo tignoolajiyada cusub ee astaanta u ah ciyaarahayada abaal-marinta lagu guuleysto. Waxaan aaminsanahay in tani ay siin doonto taageerayaasha DC gabi ahaanba aragti cusub oo ku saabsan jilayaasha, bay'ada iyo sheekooyinka ay jecel yihiin. "
"Ma aad u qancin karno DC Heroes & Villains, taas oo ka dhigaysa kartida Ludia iyo hal-abuurnimada bandhig buuxa," ayuu yiri Chris DeWolfe, aasaasaha iyo maamulaha Jam City. "Tani waxay noqon doontaa markii ugu horeysay ee taageerayaasha DC ay abuuraan kooxo riyooyinkooda ah ciyaarta-3 doorka ciyaarista, iyagoo isku daraya geesiyaal iyo kuwa xun. Waxaan ku kalsoonahay in taageerayaasha ay ku afuufi doonaan waxa ay ku qaban karaan ciyaarta.”
Jam City waxay dhowaan dhamaystirtay la wareegiddeeda Ludia Sebtembar 2021, iyada oo sii wadda fulinta himilada shirkadda si ay u xoojiso faylalka caalamiga ah ee istuudiyeyaasha ugu sarreeya kuwaas oo soo saara oo daabacaadda dakhli-ururinta ugu sarreeya gudaha-horumarsan iyo kuwa saddexaad ee shatiga IP-ku-salaysan.